Plus အရွယ်အစားကြိုးမဲ့ညှိနိုင်သောအပြည့်အဝဖွန်းပါးဇာအမျိုးသမီးဘရာ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
Plus အရွယ်ကြိုးမဲ့ Adjustable Full Cup ပါးလွှာသောအမျိုးသမီး Bra
အရောင် အနီရောငျ ပန်းရောင် ပြာသော Black က အညိုရင့်ရောင် အညိုရောင်
ဖလား Size ကို B C D
ခညျြအနှော Size ကို 44 100 40 90 36 80 42 95 38 85 46 105
အနီရောင် / ခ / 44 ၁၀၀ အနီရောင် / ခ / 40 ၁၀၀ အနီရောင် / ခ / 36 ၁၀၀ အနီရောင် / ခ / 42 ၁၀၀ အနီရောင် / ခ / 38 ၁၀၀ အနီရောင် / ခ / 46 ၁၀၀ အနီရောင် / C / 44 100 အနီရောင် / C / 40 90 အနီရောင် / C / 36 80 အနီရောင် / C / 42 95 အနီရောင် / C / 38 85 အနီရောင် / C / 46 105 အနီရောင် / D / 44 100 အနီရောင် / D / 40 90 အနီရောင် / D / 36 80 အနီရောင် / D / 42 95 အနီရောင် / D / 38 85 အနီရောင် / D / 46 105 ပန်းရောင် / B / 44 100 ပန်းရောင် / B / 40 90 ပန်းရောင် / B / 36 80 ပန်းရောင် / B / 42 95 ပန်းရောင် / B / 38 85 ပန်းရောင် / B / 46 105 ပန်းရောင် / C / 44 100 ပန်းရောင် / C / 40 90 ပန်းရောင် / C / 36 80 ပန်းရောင် / C / 42 95 ပန်းရောင် / C / 38 85 ပန်းရောင် / C / 46 105 ပန်းရောင် / D / 44 100 ပန်းရောင် / D / 40 90 ပန်းရောင် / D / 36 80 ပန်းရောင် / D / 42 95 ပန်းရောင် / D / 38 85 ပန်းရောင် / D / 46 105 အပြာ / ခ / 44 100 ကို အပြာ / ခ / 40 90 ကို အပြာ / ခ / 36 80 ကို အပြာ / ခ / 42 95 ကို အပြာ / ခ / 38 85 ကို အပြာ / ခ / 46 105 ကို အပြာ / C / 44 100 အပြာ / C / 40 90 အပြာ / C / 36 80 အပြာ / C / 42 95 အပြာ / C / 38 85 အပြာ / C / 46 105 အပြာ / D ကို / 44 100 အပြာ / D ကို / 40 90 အပြာ / D ကို / 36 80 အပြာ / D ကို / 42 95 အပြာ / D ကို / 38 85 အပြာ / D ကို / 46 105 အနက်ရောင် / B / 44 100 အနက်ရောင် / B / 40 90 အနက်ရောင် / B / 36 80 အနက်ရောင် / B / 42 95 အနက်ရောင် / B / 38 85 အနက်ရောင် / B / 46 105 အနက်ရောင် / C / 44 100 အနက်ရောင် / C / 40 90 အနက်ရောင် / C / 36 80 အနက်ရောင် / C / 42 95 အနက်ရောင် / C / 38 85 အနက်ရောင် / C / 46 105 အနက်ရောင် / D / 44 100 အနက်ရောင် / D / 40 90 အနက်ရောင် / D / 36 80 အနက်ရောင် / D / 42 95 အနက်ရောင် / D / 38 85 အနက်ရောင် / D / 46 105 အညိုရင့်ရောင် / B / 44 100 အညိုရင့်ရောင် / B / 40 90 အညိုရင့်ရောင် / B / 36 80 အညိုရင့်ရောင် / B / 42 95 အညိုရင့်ရောင် / B / 38 85 အညိုရင့်ရောင် / B / 46 105 အညိုရင့်ရောင် / C / 44 100 အညိုရင့်ရောင် / C / 40 90 အညိုရင့်ရောင် / C / 36 80 အညိုရင့်ရောင် / C / 42 95 အညိုရင့်ရောင် / C / 38 85 အညိုရင့်ရောင် / C / 46 105 အညိုရင့်ရောင် / D / 44 100 အညိုရင့်ရောင် / D / 40 90 အညိုရင့်ရောင် / D / 36 80 အညိုရင့်ရောင် / D / 42 95 အညိုရင့်ရောင် / D / 38 85 အညိုရင့်ရောင် / D / 46 105 Light beige / B / 44 100 ဖြစ်သည် Light beige / B / 40 90 ဖြစ်သည် Light beige / B / 36 80 ဖြစ်သည် Light beige / B / 42 95 ဖြစ်သည် Light beige / B / 38 85 ဖြစ်သည် Light beige / B / 46 105 ဖြစ်သည် Light beige / C / 44 100 Light beige / C / 40 90 Light beige / C / 36 80 Light beige / C / 42 95
Plus အရွယ်ကြိုးမဲ့ Adjustable Full Cup ပါးလွှာသောအမျိုးသမီး Bra - အနီရောင် / B / 44 100 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ဘရာစီယာပုံစံ: Push Up၊ Plunge၊ Padded၊ Unlined
ပစ္စည်း: Polyester, Spandex, ဇာ၊ လဲမှို့
ပိတ်သိမ်းအမျိုးအစား: လေးချိတ်နှင့်မျက်စိ, နောက်ကျောပိတ်
သိုင်းကြိုးအမျိုးအစား: Non-convertible ကြိုး, Adjustments- ကြိုး
အရွယ်အစား: 80, 85, 90, 95, 100, 105
အရောင်များ: အနီရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အပြာ၊ ပန်းရောင်၊
ပါဝင်သည်: ဘရာဇီး * 1
နွေးထွေးသောသတိပေးချက် - ဒီဘရာစီယာဟာအာရှအရွယ်ဖြစ်တယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီးအရွယ်အစားကိုယူပါ။ ဥပမာ US တွင် .36D၊ ဒီတစ်ခုအတွက် 38D ။
ရင်သားကင်ဆာအောက်မှာ Malomerit ။ ၈၂ စင်တီမီတာရှိသင့်သည်။ သို့သော် 82 ဖြစ်သင့်သည်။
မင်းအတွက်ကြယ် ၁၀ ပွင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အရွယ်အစားကိုက်ညီ, အရည်အသွေးကောင်း! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
နက်ရှိုင်းသောအတွင်းခံအဝတ်အစားကိုနှစ်သက်သူသည်ကိုယ်ခန္ဓာကြမ်းပြင်ကိုပိတ်ထားသည်။ )) အနည်းငယ်ပိုသည်၊ သို့သော်သင်ကဝတ်ဆင်နိုင်သည်) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အစဉ်မပြတ်ငါ 40-90 C ကိုဝယ်သည်, ရင်ဘတ်အောက်မှာအသံအတိုးအကျယ် 89, ရင်ဘတ် 104. ဒီတစ်ခုအရွယ်အစားပိုမိုယူ။ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကြီးမြတ်မထိုက်မတန်။